Sida Loo Abuuro Liisaska Suuqgeynta Emailka Ka Fiican Adoo Isticmaalaya Baraha Bulshada
Sabtida, Janaayo 25, 2020 Khamiista, Noofembar 12, 2020 Ronen Shnidman
Suuqgeynta iimeylku waxay ahayd dariiq caan ah oo loogu talagalay suuqleyda inay ku gaaraan macaamiisha suurtagalka ah tan iyo korsigii baahsanaa ee dhexdhexaadka ahaa ee 1990-meeyadii. Xitaa iyada oo la abuurayo farsamooyin cusub sida warbaahinta bulshada, saamaynta, iyo suuqgeynta waxyaabaha ku jira, emaylka ayaa wali loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu wax ku oolka badan marka loo eego sahan lagu sameeyay 1,800 suuqleyda ay sameeyeen Smart Insights iyo GetResponse Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in iimaylka suuqgeynta hababka ugu fiican aysan ku soo kordhin tikniyoolajiyad cusub. Thanks to warbaahinta bulshada ayaa hadda jira
Suuqge ahaan, ma jiraan wax ka xanaaq badan oo waqti badan ku qaadanaya sidii aad ula macaamili lahayd xogta dhaqaaqaysa iyo arrimaha la xiriira sharafta macluumaadka. Ansaxnimada waxay ka kooban tahay adeegyo softiweer iyo xalal ka caawiya shirkadaha inay ogaadaan halka ay la taagan yihiin xogtooda qiimeynta socota, digniinta, iyo aaladaha lagu saxo arrimaha xogta. Muddo ka badan toban sano, tobanaan kun oo maamuleyaal ah oo ka kala socda in ka badan 20 dal oo adduunka ah ayaa aaminay ansaxnimada inay dib ula soo noqdaan daacadnimadooda CRM.